Izindaba ezinoju kwabasiza othisha - Ilanga News
Home Izindaba Izindaba ezinoju kwabasiza othisha
Izindaba ezinoju kwabasiza othisha
UMnyango wezeMfundo unqume ukungazinqamuli izinkontileka zabo okwamanje
UNGQONGQOSHE wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga.
BAZOHLEKA bodwa abantu abasha ababamba amatoho ezikoleni okuba ngabasizi bothisha njengoba izinkotileka zabo zingeke zisanqanyulwa ekupheleni kwenyanga, sezizoqhubeka kuze kushaye uNcwaba (August). UMnyango wezeMfundo eyisiSekelo kuzwelonke, uthi kusukela mhlaka-1 kuMbasa (April) kuqala isigaba sesithathu salolu hlelo olwasungulwa nguMengameli wezwe uMnu Cyril Ramaphosa, lokuthi kuqashwe intsha engasebenzi ilekelele othisha ezikoleni. Lesi sigaba sizophela mhlaka-30 kuNcwaba (August) kulo nyaka. Okhulumela uMnyango wezeMfundo kuzwelonke uMnu Ellijah Mhlanga, uthi lesi sinqumo sithathwe ngenxa yokubonakala kokuthi umsebenzi mningi ezikoleni njengoba abafundi sebebuyele ngokugcwele nsuku zonke, lungasekho uhlelo lokushintshana.
“Akusibona bonke abazoqhubeka kulolu hlelo njengoba kubonakale ukuthi abanye babo abanazo kahle izimfanelo zokuthi bagcinwe. Ngakhoke bazosizwa ngezinye izindlela zokuphila okungamanye amathuba abangawathola, okubalwa uqeqesho lokuthi yenziwa kanjani incwadi yesicelo somsebenzi (Curriculum Vitae),” kusho uMnu Mhlanga. Uveze ukuthi izikole kufanele zinike umnyango zonke izimfanelo zentsha ezodluliselwa esigabeni sesithathu salolu hlelo ukuze ifakwe kwi data base kazwelonke. Uthi uqeqesho olutholwe yintsha esigabeni sesibili salolu hlelo, yilona oluzosiza kakhulu ekutheni ilekelele ekufundiseni ezikoleni. Utshele abezindaba ukuthi akufakwa izicelo ezintshakodwa kuzolungiswa izinkontileka zabo.
“Iminyango yezemfundo ngokwezifundazwe, izokhipha isekhula yakho konke oku-dingeka kwabazodluliselwa esigabeni sesithathu salolu hlelo,” kusho uMnu Mhlanga. Uthi lolu hlelo luhlomulise intsha elinganiselwa ku-280 000. Imali ebekade ihlinzekelwe lolu hlelo ngesikhathi luqala ngoLwezi (November) ka-2020, wu-R7 billion ekhishwe umgcinimafa kazwelonke. UMnu Mhlanga, uthi inhloso enkulu yalolu hlelo wukubonelelwa kwentsha ehlezi emakhaya engasebenzi, ukuze ilekelele emfundweni yakuleli. “Ziwu-868 000 izicelo zabantu abasha esizitholile ngesikhathi kufika lolu hlelo, kwabe sekuhlomula u-67% wabo okungabantu abangu-200 000 abebekade belekelela othisha, kuthi u-33% wenza imisebenzi ejwayelekile yangaphakathi,” kusho uMnu Mhlanga. Intsha esebenza ezikoleni, ikhokhelwa u-R3 700 wumnyango, kanti ngesikhathi kuqalwa uhlelo bekade ikhokhelwa ngothishanhloko ezikoleni kwase kuvalwa lokho ngenxa yokutholakala kokuthi bayayidla abanye othishanhloko ingafiki kubaqashwa.
Previous articleUdinga u-R500 000 onesifo esingajwayelekile esibindini
Next articleKuqokwe uKaMayisela ukwengamela iThomo Foundation